ကလေးငယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း - intouchmedicare
ကလေးများအတွက် ကာကွယ်ဆေးများသည် မိဘများ၏မေတ္တာကို ကိုယ်စားပြုသည့် လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည့် အကာအကွယ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ကလေးကသူ့ကိုယ်သူ ဂရုမစိုက်နိုင်သေးဘူး။ ထို့ကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် သူ့အတွက် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရာတွင် အရေးပါသော အကူအညီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါက သူ့ဘဝရဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း အကျိုးပြုစေလိမ့်မည်။ ကလေးငယ်များကို အသက်အရွယ်အလိုက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အထူးဂရုပြုရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးဆိုသည်မှာ ပဋိပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးတစ်ခုရောဂါမဖြစ်ပါစေရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုစီသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတည်ဆောက်ရန် မတူညီကြသည်၊ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အချို့သောကာကွယ်ဆေးများသည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အထိ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးများစသည်တို့ကို ထပ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ခုခံအားတိုးစေရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ကလေးရော လူကြီးရော ထိုးနိုင်ပါသည်။
ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ် (Poliovirus) ကာကွယ်ဆေး ၊ဤဆေးသည် ခြေလက်များဖောရောင်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းစသည့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ဟီမိုဖီလ်လပ်စ် အင်ဖလူရင်ဇာဘီ (HIB) ကာကွယ်ဆေး၊ဤဆေးသည် ထိပ်ကပ်နာရောဂါ(sinus)နှင့် bronchial ရောဂါများအတွက်ကာကွယ်ပြီး၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်းများကိုလဲ ကာကွယ်ပေးသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး (HIV) ကာကွယ်ဆေး အသည်းကိုပိုးဝင်စေသော ရောင်ရမ်းစေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ (JE) ကာကွယ်ဆေး၊JE ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ခြင်နက်များ သို့မဟုတ် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ခြင်ကိုက်ခြင်းဖြင့် လူများကို ဆက်သွယ်စေနိုင်သည်။
ရိုတာ ကာကွယ်ဆေး (Rota) သည် ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ဝမ်းလျှောခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် သောက်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
*ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး ရောဂါ ၆ မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသည်။၎င်းတို့မှာ-ဆုံဆို့နာကာကွယ်ဆေး၊မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး၊ကြက်ညှာချောင်းဆိုး ကာကွယ်ဆေး၊ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ် (Poliovirus) ကာကွယ်ဆေး၊ဟီမိုဖီလ်လပ်စ် အင်ဖလူရင် ဇာဘီ (HIB )ကာကွယ်ဆေး၊အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး (HIV) ကာကွယ်ဆေး များတို့ဖြစ်ပါသည်။
**ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး ရောဂါ ၅ မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသည်။၎င်းတို့မှာ-ဆုံဆို့နာကာကွယ်ဆေး၊ကြက်ညှာချောင်းဆိုးကာကွယ်ဆေး၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး၊ ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ် (Poliovirus)ကာကွယ်ဆေး၊ ဟီမိုဖီလ်လပ်စ် အင်ဖလူ ရင်ဇာဘီ (HIB) ကာကွယ်ဆေး များတို့ဖြစ်ပါသည်။
*****ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး ရောဂါ ၄ မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသည်။၎င်းတို့မှာ-ဆုံဆို့နာ ကာကွယ်ဆေး၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး ကာကွယ်ဆေး၊ မေးခိုင် ကာကွယ်ဆေး၊ လီယိုဗိုင်းရပ်စ် (Poliovirus) ကာကွယ်ဆေး များတို့ဖြစ်ပါသည်။
(1) MMR ကာကွယ်ဆေးကို အသက်9လတွင် ကာကွယ်ဆေးမထိုးပါက တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးထိုးသင့်ပါသည်။
(2) ရိုတာ (Rota) ကာကွယ်ဆေး၏ ပထမဆုံးအကြိမ်သည် ထိုးနိုင်သောသက်အငယ်ဆုံးမှာ6ပတ်ဖြစ်သည်။
(3) ရိုတာ ကာကွယ်ဆေး (Rota) ကို ဒုတိယအကြိမ်သည်24 ပတ်ထက်မကျော်သောကလေးဖြစ် ထိုးသင့်ပါသည်။
ကလေးကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ရန် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ ?
မိဘများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးတိုင်း သင့်ကလေး၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးသောစာအုပ်များကို ယူဆောင်လာရန် မမေ့ပါနှင့်။
အဖျားရှိရင် ကာကွယ်ဆေးမထိုးသင့်ပါဘူး သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောရောဂါ၊ အအေးမိခြင်းဝမ်းလျှောမှလွဲ၍ အဖျားမရှိရင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ရပါသည်။
သင့်ကလေးတွင် ဆေးဝါး သို့မဟုတ် အစားအသောက်နှင့် ဓာတ်မတည့်မှုတစ်ခုခုရှိနေပါက၊ ကာကွယ်ဆေးမထိုးမီ သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သူနာပြုအား အသိပေးသင့်သည်။
ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ ချက်ချင်းအိမ်မပြန်ပါနဲ့။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် ဆေးခန်းတွင် အနည်းဆုံး မိနစ် 30 ၌နေသင့်သည်။
ကလေးသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နှောင့်နှေးနေပါက ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ?
မည်သည့် ကလေးငယ်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားမဆို ထိုးရန်အချိန်ကျော်လွန်ပေမဲ့ သိပြီးနောက်ချက်ချင်းထိုးနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေး ၁ ကြိမ်ထက်ပိုထိုးရန်လိုအပ်သောကလေးများတွင် နောက်တစ်ကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နှောင့်နှေးပါက၊ ကာကွယ်ဆေးပထမအကြိမ်ကို ပြန်မထိုးဘဲနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်ကိုဆက်ထိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နှောင့်နှေးနေသောကလေးများသည် ၁နှစ်အတွင်း၌ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အ၀ရယူလိမ့်မည်၊အဲ့ပြီးနောက်ကာကွယ်ဆေးကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌စဉ်ဆက်မပြတ်ထိုးသင့်ပါသည်။
ကလေးအား ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်အခါ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မူမမှန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ မိဘများ သတိထားရမည့် အဓိကအချက်များမှာ-
ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နေရာ၌ နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နီခြင်း
ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဖုများထွက်ခြင်း။
သို့သော် ရောဂါလက္ခဏာများ ပြင်းထန်ပါက သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြာရှည်ပါက မိဘများသည် ကလေးကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဆရာဝန်ထံချက်ချင်းပြသင့်သည်။ ဤအတိုင်းထားခဲ့လျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
ကလေးအား အချိန်မီ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအမျိုးအစားကို ပြီးအောင်ထိုးသင့်ပါသည်။မိဘများသည် ကလေးများကို သင့်အိမ်အနီးရှိ Intouch Medicare Clinic တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် သို့မဟုတ် နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်ဆေးခန်းမှ ရှာဖွေနိုင်သည် သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်များရယူရန်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။